Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee Melbourn oo ka qeybgashay shirka Jaaliyada oromadu ku qabatay Australiya
Posted by ONA Admin	/ December 23, 2012
Maanta oo bishu tahay 23 December 2012 waxaa xubno ka mid ah jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria gaar ahaan ururada bulshada sida ururka OYSU Melbourne ka qeybgaleen xaflad ey soo aggaasimeen Jaaliyada Oromia.
Jaaliyada Oromia ee Victoria iyo Jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria waxaa ka dhaxeeya xirir aad u sareeya. Labadaan jaaliyadood ayaa halmabda kadhaxeeya, kaaso ah sidii loogaarsiin laha Dowlada Australia dhibaatooyinka dowlada Ethiopia kuhayso shacabka Ogadeniya iyo qowmiyada ormada ee ka soojeeda oo dhibaato gumeysi xasuuq iyo dhibaatoyin kaleba lagu hayo.
Waxaa warbixin kooban xaflada kasoojeediyey Mudane Hassan Nuur oo ah gudoomiya kuxigeen jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria. Hassan ayaa u mahadceliyey jaaliyada Oromada, kuna dhiirigaliyay in si wadarjir ah u shaqeyan labada jaaliyadood wadashaqayntaasna in kor loosii qaado si horumar dagdag ah looga gaadho qadiyadaas.